Sunday November 03, 2019 - 12:14:22 in Wararka by Liibaan Jeexoow
dowladda Mareykan ayaa sare uqaadday duqeymaha xagga ah cirka ah ee ay ka geysanayso gudaha wadanka Afghanistan.
Markii ugu horraysay dowladda mareykanka ayaa qiratay in bil gudahood ay wax kabadan 1000 duqeyn ay ka geysatay Afghanistan tan iyo markii ay iclaamisay in ay soo gaba gabaysay dagaalkii tooska ahaa ee wadankaas sanaddii 2014.
Wasaaradda difaaca Mareykanka ayaa war ay soo saartay ku sheegtay in bishii September ay Afghanistan ka fulisay illaa 1113 weerar oo xooggan cirka waxaana weeraradaas lagu sheegay kuwa lagu taageerayo xukuumadda dabadhilifka Kaabuul.
Pentagoonka mareykanka wuxuu sheegay in weeraradan lagu beegsaday dagaalyahannada imaarada islaamiga Afghanistan oo qarka ufuulay in ay qabsadaan magaalada Qunduus ee dhacda waqooyiga dalka.
Afhayeenka Imaarada islaamiga ah oo tacliiqiyay warka kasoo baxay Mareykanka ayaa sheegay in badanaa duqeymaha mareykanku uu fuliyay lagu laayay dad shacab ah oo aan waxba galabsan.
"maamulka camiilka ah ee Kaabuul waa soo dhoweeyay duqeymaha 1113-da gaaraya ee mareykanku dadka rayidka ah k gummaaday balse alle fadligiis inkastoo duqeymahaasi jiraan hadane saldhigyada cadowga kama badbaadinta weerarada daran ee mujaahidiinta uga imaanaya "ayaa lagu yiri war ay faafisay imaarada islaamiga.
Waxaa lays weydiinayaa su'aalo ay kamid yihiin waa kuwa dhibaatada ugu daran kasoo gaartay duqeymaha kunka ka badan ee Mareykanku geystay? jawaabta ayaa ah in khasaaraha ugu badan uu dadka shacabka ah kasoo gaaray duqeymaha 95%.
Geesiyaasha imaarada islaamiga ah ayaa wacdaro ka dhigaya saaxaadka jihaadka afghanistan waxayna furayaan dhulal hor leh iyagoo kadabka ka jaraya maleeshiyaadka xukuumadda camiilka ah iyo ciidamada jinsidayada kala duwan leh ee afghanistan duullaanka ku jooga kuwaas oo ku howlgala magaca Ururka NATO.